I-Universal Logo - I-Drop Video
Ikhaya / Specials Products / Universal Logo
Isethulo sevidiyo se-DJ esitayela se-Universal logo. Ukuzijabulisa okuvamile, okuyisithonjana esizizwayo kuyabuzwa kucatshangwa ngegama lakho le-DJ nombhalo wangokwezifiso. Le vidiyo ye-DJ isiqiniseko sokubamba. Kunkulu njengesethulo se-DJ ekuqaleni noma isethi yakho, ukuvala ubusuku noma, ukuvala, phakathi ngqo. Njengawo wonke ama-DJ ethu wehla namavidiyo we-DJ lokhu kuyinhlangano evumelanisiwe, ikhwalithi ephakeme, ividiyo ephezulu yokuchaza. Yengeza idokhumenti eyimfihlo noma eyesidlangalaleni evezwe kuvidiyo kuphela ye-$ 50 kuphela.
SKU: Universal Isigaba: Specials Products
Isethulo sevidiyo se-DJ esitayela se-Universal logo. Ukuzijabulisa okuvamile, okuyisithonjana esizizwayo kuyabuzwa kucatshangwa ngegama lakho le-DJ nombhalo wangokwezifiso. Le vidiyo ye-DJ isiqiniseko sokubamba. Kunkulu njengesethulo se-DJ ekuqaleni noma isethi yakho, ukuvala ubusuku noma, ukuvala, phakathi ngqo. Njengawo wonke ama-DJ ethu wehla namavidiyo we-DJ lokhu kuyinhlangano evumelanisiwe, ikhwalithi ephakeme, ividiyo ephezulu yokuchaza. Yengeza idokhumenti eyimfihlo noma eyesidlangalaleni evezwe kuvidiyo kuphela ye-$ 50 kuphela